Ahoana no mba hanao ILS fipetrahana ao FSX amin'ny PA380
fanontaniana Ahoana no mba hanao ILS fipetrahana ao FSX amin'ny PA380
2 taona 1 volana lasa izay #480 by JanneAir15
Salama! Ary Te hahafantatra ny fomba hanaovana ILS nanketo FSX ny tetikasa A380 Airbus. Efa mahay manao ILS fipetrahana amin'ny fiaramanidina nefa noho ny tetikasa Airbus cockpit dia somary hafa tsy mba toy izany aho antoka. Izaho dia miezaka ny hanao izany ILS nanketo amin'ny fiaramanidina fa tsy ahavitana izay. Teny an-dalana aho, tao amin'ny cockpit virtoaly. Misy bokotra samihafa? Ary ny fiaramanidina Air France no A380 VC avy toerana ity. Mba ampio aho amin'izany.
2 taona 1 volana lasa izay #483 by Gh0stRider203
Fotoana mamorona pejy: 0.207 segondra